Samachar Batika || News from Nepal » यो ड्रेमा साराका फ्यानले सोधे: कसरी अडियो लुगा ? (फोटो फिचर)
यो ड्रेमा साराका फ्यानले सोधे: कसरी अडियो लुगा ? (फोटो फिचर)
काठमाडौं, चैत १८- बलिउडमा पछिल्लो समयकी चर्चित नायिका हुन सारा अली खान । बेला बेला सामाजिक संजालमा तस्विर सेयर गरेर चर्चामा आउने उनी अहिले फेरी पनि तस्विरकै कारण चर्चामा आएकी छन् । खानले हालै नयाँ डिजाइनको लुगाहरु लगाएर सामाजिक संजालमा पोस्ट गरेकी छिन्। तस्विरमा उनी अत्यन्तै सुन्दर देखिएकी छन् भने उनले लगाएको सेतो ब्ला’उजमा ब्या’कलेस छैन् ।
साराको सेतो ब्ला’उजसहितको ड्रेस भा’इरल बनेको हो। उक्त तस्बिर पोस्ट भएसँगै उनका फ्यानहरुले सो लुगा कसरी शरीरमा अडियो भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। मनिष मल्होत्राको डिजाइनमा बनाइएको स्टाइलिस कपडा लगाएर साराले फोटोसु’ट गरेकी हुन्।
साराले सोही ड्रेसमा एउटा भिडिओ पनि सार्वजनिक गरेकी छिन् जहाँ उनको ड्रेस कसरी अडिएको रहेछ भनेर प्रस्ट देख्न सकिन्छ । खासमा उनको ब्ला’उज ब्या’कलेस नभएको र त्यसको पछाडिको भाग स्किन कलरको फे’ब्रिक भएको बताइएको छ
थप अरु तस्विरहरु;
हनिमुनमा रहेकी दियाले भनिन: प्रदूषणले पुरुषको गोप्य अं’गमा नोक्सान पुर्याईरहेको छ (फोटो फिचर)
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री दिया मिर्जा अहिले आफ्ना पतिसँग हनिमूनमा छन् । उनको हालसालै विवाह भएको हो । हनिमुनमा रहेकी दियाले पुरुषको गो’प्य अं’गका बारेमा गरेको एक ट्वीटका कारण ट्रो’ल बनेकी छन् । वास्तवमा, आफ्नो ट्वीटमा, दीयाले प्रदूषणका कारण पुरुषको अं’गमा हुने नोक्सानको बारेमा भनेकी छिन्।
दीयाले हालसालै यो कुरा ट्वीट गरिन् जसमा उनले अनुसन्धानमा आधारित एक रि’पोर्ट पनि ट्याग गरेकी छन् । जसमा वातावरणमा भएको वि षा क्त रसायनले शु क्रा णु हरूको संख्या र अ ण्ड कोषलाई असर गरिरहेको उल्लेख छ । यसले पुरुषहरूको निजी भागलाई असर गरिरहेको छ।
उनले आफ्नो ट्वीटबाट मानिसहरूलाई प्रकृतिको महत्त्ववारे पनि बताउन चाहेकी छन् । यस अघि पनि दीयाले भनेकी थिइन कि कोभिड १९ महामारी सबैले आफुलाई जोगाउनुपर्छ । र अब हामी सबैले वातावरणलाई प्रदूषित हुनबाट जोगाउन विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। दीयाले केही समय अघि व्यवसायी वैभव रेखीसँग विवाह गरेकी हुन् ।
प्रकाशित मिति १९ चैत्र २०७७, बिहीबार ०५:२३